Shina dia nanala maina ny famokarana ahitra Barley | Ruisheng
100% AD voajanahary voajanahary / vovoka ranom-boankazo maina
Ny ahitra barley dia iray amin'ireo ahitra maintso - ny hany zavamaniry eto an-tany izay afaka manome famahanana sakafo tokana hatrany am-bohoka ka hatramin'ny antitra. Ny barley dia foto-tsakafon-tsakafo amin'ny ankamaroan'ny kolontsaina. Ny fampiasana ny orza ho an'ny sakafo sy ny zava-mahadomelina dia hatramin'ny andro fahagola.
Ny vitamina sy mineraly mahavariana dia hita ao anaty ravina barley maitso. Ny ravina dia manana fahaizana mandray otrikaina avy amin'ny tany. Rehefa 12-14 santimetatra ny halavan'ny orza, dia misy vitamina, mineraly ary proteinina ilaina amin'ny sakafon'olombelona, ​​miampy klôlofila.
1. Vovon'ahitra orza ampiasaina hanatsarana ny tsimatimanon'olombelona;
2. Vovoka ahitra bara dia antioxidant mahery;
3. vovoka ahitra vary orza miaraka amin'ny fiasa mampihena;
4. vovoka ahitra vary hordea ampiasaina hitsaboana fitohanana;
5. Ny vovo-bozaka ahitra dia manampy amin'ny fikorianan'ny rà sy ny fihenan'ny toaka amin'ny vatana amin'ny ankapobeny.
1. Ampiharina amin'ny sehatry ny vokatra ara-pahasalamana, ny vovo-bary azo avy amin'ny ahitra dia azo ampiasaina ho akora;
2. Ampiharina amin'ny sehatry ny fanafody, ny vovoka ahitra bara dia azo ampiasaina ho akora;
3. Ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo, ny vovo-bararata extarct ahitra dia azo ampiasaina ho additives.
Fepetra takiana amin'ny fahatsapana:
Toetoetran'ny organoleptika Famaritana
Fisehoana / Loko Maitso
Aroma / Matsiro Ny tsiro mampiavaka ny Barley Grass, tsy misy fofona vahiny na tsiro
Fanisana isan-takelaka <1000 cfu / g
Masirasira sy bobongolo tanteraka <100cfu / g
TROMA, fonosana tsy misy fangarony, kitapo vita amin'ny aluminium
1. 1-5kg / kitapo foil aluminium, kitapo plastika roa ao anatiny ary kitapo foil aluminium iray any ivelany.
2. Amponga 25kg / fibre, 28 kg mahery.
Carton: lanjan'ny 25KG; 28 KG lanja mavesatra. Kitapo PE any anaty sakafo sy baoritra ivelany.
Famindrana kaontenera: 12MT / 20GP FCL; 24MT / 40GP FCL
Tokony hasiana tombo-kase ary hotehirizina eo amin'ny paleta, lavitra ny rindrina sy ny tany, ao anatin'ny Toerana madio, maina, mangatsiaka ary misy rivotra, tsy misy fofona hafa, amin'ny mari-pana ambanin'ny 22 ℃ （72 ℉） ary ambanin'ny hamandoana 65% (RH <65 %).
24 Volana manomboka amin'ny daty famokarana ao anatin'ny fepetra fitahirizana voatondro.
Teo aloha: Rootus Lotus voajanahary maty maina / maina 100%
Manaraka: 100% AD voajanahary voajanahary / maina malefaka malefaka Flake / Slice
Vovoka tongolo tsy ampy rano
100% laisoa volomparasy maina / maina AD AD ...
Voasary Maitso tsy ampy rano
Vovoka karaoty tsy ampy rano
Granule tongolo gasy tsy ampy rano
Ovy omena sakafo, Vovoka karaoty maina, Karoty marobe, L - Phenylalanine (PHE), Taurine, Vermicelli,